01 / 06 / 2021 01 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 343 Views စာ0မှတ်ချက် 71734 ကေ၏ Blade သံသရာ, 71739 Ultra Sonic Raider က, 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech, ၇၁၇၅၂ Ninja Sub Speeder, 71753 မီးသတ်နဂါးတိုက်ခိုက်မှု, 71754 ရေနဂါး, 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း, 71756 ရေအားလျှပ်စစ် Bounty, Lego, Lego Ninjago, Lego Ninjago အမွေအနှစ်, Sets အသစ်များ, Ninjago, NINJAGO အမွေအနှစ်, ပင်လယ်ကြမ်းပြင်, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021, အဆိုပါကျွန်း
သစ်တစ်ခုအကွာအဝေး Lego Ninjago စုံတွဲများသည်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်လှိုင်းတံပိုးများထိုးနှက်နေသည်။ သူရဲကောင်း Ninja အသင်းသည်serရာမမြွေများ၊ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရေအောက်စွန့်စားမှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
နွေရာသီအတွက်သတ်မှတ် Lego Ninjago မှယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com အသစ်နှင့်အဟောင်းနှစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းအရာဖုံးလွှမ်းစုစုပေါင်းကိုးအစုံနှင့်အတူ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ အကယ်၍ သင်ကအမေရိကန်ကိုရောက်နေလျှင်၊ သူတို့ကိုသင်ရရှိနိုင်ဖို့သြဂုတ်လ ၁ ရက်အထိစောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အခြားဒေသများရှိသူများသည်ယခုအစီအစဉ်များကိုမှာယူနိုင်သည်။
ယခုရာသီအတွက်မော်ဒယ်များမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သားရဲနှင့်အတူရေအောက်ဘုရားကျောင်း၊ ကားအတွင်းခန်းများပါရှိသောနင်ဂျာများအတွက်နောက်ထပ်မိုဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်းနှင့် ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားအတွက်တည်ဆောက်နိုင်သောပူဇော်သကာများကိုဖော်ပြသည့် Legacy အစုံများပါဝင်သည်။ Ninjago။ ဒီနေရာမှာလှိုင်းကိုဖွဲ့စည်းသောမော်ဒယ်တိုင်း။
p အဖြစ်art ကိုးယောက်ထဲက အသစ်အစုံသူတို့ထဲကနှစ်ခုသည်နောက်ဆုံးအားဖြင့်ရှေးဟောင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များမှလှုံ့ဆော်ပေးသော Nya နှင့် Zane ၏အဝတ်အစားများဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် Golden Legacy minifigure အစီအစဉ်ကိုပြီးစီးရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ သူတို့နှင့်အတူပါ ၀ င်သောမော်ဒယ်များသည်စက်ဘီးနှင့်ဂျက်လေယာဉ်များသို့ခွဲထွက်နိုင်သောတင့်ကားကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်နှင့်ပထမရာသီမှကြောက်မက်ဖွယ်မီးတောက်သောနဂါးတို့နှင့်အတူရယ်မောစရာမဟုတ်ပါ။ Ninjago.
မော်ဒယ်တစ်ခုချင်းစီကိုယခုအခါတရားဝင်အွန်လိုင်းမှရရှိနိုင်ပါသည် Lego စတိုးအနည်းဆုံးအမေရိကန်ပြင်ပရှိသူများအတွက်ဘတ်ဂျက်တိုင်းနှင့်ကိုက်ညီရန်စျေးနှုန်းများ၊ အရွယ်အစားများရှိသည်။ ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသူများအတွက်သင်လည်းထိုအရာများကိုရှာနိုင်သည် LEGO.com အရမ်း။ ငါတို့ပြီးပြီ ပြန်လည်သုံးသပ် သငျသညျ၏ရာသီသစ်အဘို့အနောက်ဆုံးအခနျးဘာကိုကြည့်ချင်ပါတယ်လျှင်သင်ကျွန်းကနေတည်ဆောက်အနည်းငယ် Ninjago.
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Ninjago ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.